कतिखेर छिराउँ भइसकेको थियो । सुरूवाल खोलेर कट्टु पनि तानेँ - Indian Girls Nude XXX Images
कतिखेर छिराउँ भइसकेको थियो । सुरूवाल खोलेर कट्टु पनि तानेँ
मेरो नाम रमेश हो, अहिले म २२ वर्षको भएँ । भाग्यका खेल भनुम् आजकल म रोजगारीका लागि साउदीमा छु । यो घटना आजभन्दा तिन वर्ष पहिलेको हो । त्यतिखेर म बौद्धको कार्पेट फ्याक्ट्रीमा काम गर्थेँ । बहिनी सकुन्तला भख्खर एसएलसी देयर पढ्न आकी थिइ । सानो कोठामा दुई जना बस्थिम । पुरानो खालको घर थियो, ट्वाइलेट बाहिर थियो । बाहिर एकदम काइ लागेको थियो । असारको बेलामा पानी खुब परो । शकुन्तला ट्वाइलेट जाँदा चिप्लेर लडिछे । उसको हरमा निकै चोट लागेछ । रूँदै आई , के भो भनेको लडेर हर खुस्को भनी । खाटमा सुत् भनेँ र सुरूवाल खोलेँ, दाहिने हरमा चोट लागेको रैछ । खानेतेल लगाएर मालिस गरिदिएँ ।
शकुन्तलाको हर मालिस गर्दा गर्दै उसको पुतीमा आँखा पुगो । चिसो रैछ । कट्टु मै मुतिस की क्या हो भनेँ , हैन भनेर उसले सुरूवाल माथी तानी । तेतिखेरसम्म मेरो लाडो सन्किसकेको थियो । पख न काँ उठेकी, भनेर समातेँ । हेर आगो को छेउमा घिउ पग्लिन्छ, तेरो देखे पछी मलाई अति भयो देन ……..भनेँ ।
धेत दाइ के भनेको अरूले था पाए भने के गर्ने……भनेर उ पन्छिन खोजी । भख्खर १७ लागेको शकुन्तलाका दुधका फाँचा मज्जाका थिए ।
कल्ले भन्छ र था हुन्छ….भन्दै आफुतिर तानेर मुखमा मुख जोडेँ । च्याप्प दुधका फाँचा समातेर मोल्न थालेँ । दुध माड्दै गालाउँधी म्वाइ खान थालेँ । सकुन्तला पनि नाइनास्ति नगरी ओच्छ्यानमा ढल्की । मेरो लाडोँ कतिखेर छिराउँ भइसकेको थियो । सुरूवाल खोलेर कट्टु पनि तानेँ । बत्ति मारेको थिएन । भुत्ला त्यति धेरै आको रैनछ । पुतीको गुलाबी फाँकाहरू क्या राम्रा देखिएका …. मेरो लाँडोको टुप्पा लगेर छिराउँ । मरेनी आमा हौ……भन्दै उ अतालिएर मेरो कम्मर फ्याक्की दिइ र आफ्नो पुती छोपी । म छाड्न सक्ने अवस्थामा थिइन । दुइटै टांग च्यातेर फेरी चढेँ र लाडोँ जबर्जस्ती छिराएँ ।
मरेँ दाइ, मेरो हर दुखो……..म मरेँ…..आज नगर्नु…….म त मर्छु…….भन्दै शकुन्तला ह्वाँ ह्वाँ रून थाली । वास्तवमा उस्को हर भन्दा पहिलो चोटी लाडो पस्दा धेरै दुखेको रैछ, पछी था पाएँ।
माया लागो र लाडो झिकेँ । लाडो झिक्न त झिकेँ, तर सन्कि राको थियो । मैले बौद्घमा ब्लु फिल्महरू हेरेको थिएँ । त्यसमा लाँडो चुसेको सिनहरू थियो । तेरो हर दुखेको भए चुसी दे न भने…. छ्या घिन लाग्छ भनेर उ मानिन । नचुस्ने भए चिकी दिन्छु भनेपछी मानी । अलिअलि गरेर चुस्न थाली, मेरो पालो मुखैमा पेलेँ । एक छीन भित्र बाहिर गरे पछी मेरो माल शकुन्तलाको मुखैमा झरो ।
त्यो दिन शकुन्तलालाई आफूसँगै सुताएँ । उसका दुधका पोका चलाउँदै सुतेँ ।
बिहान उठ्दा मेरो मुखमा हेर्नै सकिन । के लजाकी नि, जे नहुनु भइसकेपछी । अब सबै कुरा तेरै हो भनेर ओठमा म्वाइ खाइदिएँ । खाना बनाएर उ कलेज गइ, म पनि काममा गएँ । दुइ तिन दिन केही गर्ने दिइन । हर दुखीराको छ भनेर ।
चार दिनका दिन खाना खाइसकेपछी खै तेरो हरको घाउ कस्तो भो भनेर सुरूवाल खोलेँ , लड्दा सामान्य दख्खल परेको कुरा ठीक भइसकेको रैछ । आज चैं गर्ने है….भने पछी उसले टाउको हल्लार हुन्छ भनी । शकुन्तालाई कुर्ता खोल्न लगाएँ, आफु पनि नांगै भए । चार पाँच मिनेट दुध माडेँ, दुधका मुन्टा चुसेँ ।
माथी चढेँ, पुतीमा लाँडो छिर्दै छिरेन । पुती फ्याँ पार्न….भनेँ । दाई कस्तो दुख्छ क्या भनी ।
आफैले टाङ च्यातेर एउटा हातले पुतीका फाँका फैलाएँ र अर्को हातले लाँडोको मिलाएर पुतीमा हुलेँ ।
मरेँ दाइ मरेँ……झिक्नु न झिक्नु भन्दै उ रून थाली । म आजचाहिँ नचिकी छाड्ने मूडमा थिइन । चुप जाँठी नरूँ…मुजी नाटक गर्छे, तलाई पनि मजा आउँछ …..भनेर हप्काएँ ।
हैन दाइ…….एे्या ….म मर्छु…..बरू मलाइ मारी दिनु……एेय्या नि आमा हौ….मरेँ भन्दै उ चिच्याउन थाली
माचिक्ने……साला…….चिकेर धेरै मरेका छन्…..साला……चुप …..भन्दै मुख थुनेर धमाधम चिकेँ । एकछिन त रूँदै थिइ, एक छिन पछी उल्ले पनि मेरो चाकलाइ समातेर सुम्सुम्याउन थाली ।
१० मिनेट जति चिकेपछी मेरो लाँडो झर्ला जस्तो भो । झिकेर शकुन्तलाको पेटमा फुसी झारेँ ।
त्यसपछी हामी लोग्ने स्वास्नी जस्तो भएर बसिम् । कसले थाह पाउने । शकुन्तला साह्रै राम्री छे । एक वर्ष जति पछी आर्मीको केटा माग्न आएछ । आफैले सँधै चिकेर राख्न पनि नहुने । बिहे गरेर पठाइ दियौं ।
बौद्धको कार्पेट फ्याक्ट्री पनि बन्द भइ गो । अहिले अब साउदी अाको छु, दुई वर्ष भो । यहाँ त आइमाइको नाकमुख पनि हेर्न पाइदैन । कहिले गाउँ जाउँ र आइमाइ चिकुम् भइ राको छ ।
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	January 9, 2015 admin	Posted in Nepali SEX Stories	Post Permalink
← कलिलो दुध माड्दै सेक्स गर्नुको मजा	मैले सुस्मिता भाउजुको त्यो मोटो ओठ्मा चुस्दै मज्जाले वहाँको आनारदाना माडिरहेको →